ko htike's prosaic collection: သို့ / တိုက်ပွဲဝင် ရဲဘော်များ
သို့ / တိုက်ပွဲဝင် ရဲဘော်များ
အထက်ပါအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူ့ ဆန္ဒခံယူပွဲတွင် ပြည်သူများမဲပေးပုံနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကန့် သတ်ချုပ်ချယ်မှုများ နှင့်မသမာမှုများကိုတွေ့ ရှိရပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ၁၀/၁၁/၁၂/၁၃ ၇က်နေ့ များ တွင် မိတ္ထီလာ/မန္တလေး/စစ်ကိုင်း/မုံရွာရှိဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများ /အင်အားစုများ NLD တိုင်းစည်းများ နှင့်တွေ့ ဆုံပြီး မေးမြန်းဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခဲ့ပါသည်။
ဆန္ဒခံယူပွဲနှင့်ပတ်သက်ပြီး တိုင်းမှူးများ/၀န်ကြီးများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း သိခွင့်ရခဲ့ပါသည်။ စစ်သားအားလုံးသည် တပ်ရင်း/တပ်မ/ ဌာနချုပ် တို့ တွင်သာမဲပေးရခြင်း၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ ဝင်အားလုံးသည် သက်ဆိုင်ရာရဲစခန်း တွင်သာမဲပေးရခြင်း၊ ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများက ၄င်းတို့ ရုံးများတွင်သာမဲပေး၇ခြင်း၊ ကြံ့ဖွံ့/စွမ်းအားရှင်/မီးသတ်/ကြက်ခြေနီ/အမျိုးသမီးေ၇းရာ/မိခင်နှင့်ကလေး စသည့် နအဖ ၏အဖွဲ့စည်းများမှာ ဆန္ဒခံယူပွဲ လုံခြုံရေးယူ၇န် အကြောင်းပြချက်ဖြင့် အားလုံးကြိုတင်ထောက်ခံမဲပေးပြီးဖြစ်သည်။ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာများတွင်လဲ မဲရုံများတွင် ကင်မရာများ တပ်ထားသယောင် သတင်းများ ထုတ်လွှင့်ပြီး ကန့်ကွက်မဲပေးလျှင် မည်သို့ ဖြစ်မည်ကို ကြိုတင်ကောလဟာလ သတင်းများ ဖြန့် လျှက်ရှိနေပါသည်။
၁။ ၀န်ကြီးဦးအောင်သောင်းသည် မန္တလေးဈေးချိုထဲရှိ ဈေးဆိုင်များသို့ ကိုယ်တိုင်ဆင်းပြီး ဆိုင်တိုင်းသို့ ပါတိတ်ဝမ်းဆက်ပေးပြီး ထောက်ခံမဲပေးရန် စည်းရုံးလှုပ်ဆော်ခဲ့ပါသည်။
၂။ ပညာရေးဝန်ကြီးသည် ပညာရေးဌာနပေါင်းစုံသို့ ကိုယ်တိုင်ဆင်းပြီး ၀န်ထမ်းအားလုံးကို ထောက်ခံမဲပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း ထပ်တလဲလဲပြောဆိုစည်းရုံးကာ မထည့်ပါက အရေးယူမည်ဟု ပြောကြားနေပါသည်။
၃။ မုံရွာတွင် တိုင်းမှူးသည် (တပ်/ ရဲ/ ကြံ့ဖွံ့ /မီးသတ်/ စွမ်းအားရှင်/ ကြက်ခြေနီ/ အမျိုးသမီးရေးရာ/မိခင်နှင့်ကလေး/ကုန်သည်ကြီးများအသင်း စသည့် အသင်းအဖွဲ့များပါမကျန် ခေါ်ယူပြီး နံနက်မှ ညနေထိ ဟောပြောစည်းရုံးပြီး ထောက်ခံမဲထည့်ရန် ပြောကြားသွားပါသည်။
၄။ဌါနပေါင်းစုံရှိ ၀န်ထမ်းများကို၎င်းတို့၏ ဆန္ဒမပါဘဲနာမည်နဲ့မှတ်ပုံတင်နံပါတ် ယူပြီးနောက်တနေ့တွင် ကြံဖွံကဒ်များ/ အမျိုးသမီးရေးရာကဒ် များကိုိအပြီးလုပ် လာပြီး အသင်းဝင် ပြီးဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြီးမတရားသဖြင့် အသင်းဝင်ခိုင်းခြင်း များ ပြုလုပ်လျက် ရှိပါသည်။
၅။နအဖ အနေဖြင့် ၀န်ကြီးဌါနများတွင် ကန့်ကွက်မဲတစုံတရာမရှိစေရဟု အမိန့် ထုတ်ပြန်ထားရာ ၀န်ကြီးများအနေဖြင့် ၄င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဌါနများသို့ကွင်းဆင်းပြီး အားလုံး ထောက်ခံခိုင်းနေပါသည်။
၆။အရေးကြီးဆုံး အချက်မှာ ၀န်ကြီးဌါန /စစ်တပ်/ရဲ /ကြံဖွံ့များ/စွမ်းအားရှင် စသည့် ၄င်းတို့ဌါနများမှာ ယခုသိရသည့်အချိန်တွင် ထောက်ခံမဲပေးပြီးပြီ ဟုသိရပါသည်။၀န်ထမ်းများမှာကိုယ်တိုင်မဲမပေးရဘဲ ၄င်းတို့ဘာသာထောက်ခံမဲ လုပ်ယူခြင်းကိုမကျေနပ်ကျခြေ။
၄င်းအခြေအနေများကို ဌါနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများ NLD တိုင်း/စည်း များ၏ သုံးသပ်ချက်နှင့် သဘောထားများ
၁။ ၄င်းကိစ္စများကို ရိုးသားမှုမရှိဟု မြို့ကြီးတမြို့မှ တိုင်း/စည်း တဦးမှ သုံးသပ်ပြီး ဒီပွဲတွင် မိမိတို့လုံးဝ ရှုံးနိမ့် နိုင်မည်ဟုသုံးသပ်ပြီး ဆန္ဒခံယူပွဲကို ဖျက်ပစ်ရန်ဆန္ဒ ရှိပါသည်။
၂။ဌါနဆိုင်ရာတခုမှ အရာရှိတဦးကမူ ၄င်းပွဲတွင် ထောက်ခံမဲများ ရရှိပါက ၄င်းတို့ထင်တိုင်းကြဲနိုင်ပြီး ပြည်သူလူထုဒုက္ခရောက် မည်ဟု မှတ်ချက်ပြုပါသည်။
၃။အဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုမှလူကြီးများမှာ ပြည်သူလူထုမှ ကန့်ကွက်မဲပေးကြမည်ဟု အထင်ဖြင့် မျှော်လင့််နေကြပြီး အောက်ခြေတွင် နအဖ မှ ပြည်သူလူထုကို မည်သို့မည်ပုံ စည်းရုံးသိမ်းသွင်းနေသည်ကို သိရှိခြင်းမရှိပါ ။ဆန္ဒခံယူပွဲ ၏ အကျိုးကျေးဇူး အဆိုးအကောင်းကို ပြည်သူများသိရှိနိုင် ရန် အင် တိုက် အားတိုက် နှင့် လုပ်ဆောင် နိုင် ခွင့် မရှိပါ။ ၄င်းတို့နှင့် နီးစပ် ရာ အသိုင်းအ၀ိုင်းတွင် သာ လှုံ့ဆော်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
၄။နအဖ မှာ အစစ အရာရာ သေချာအောင် စီစဉ်ပြုလုပ် ပြီးမှ မေလ (၁၀) ရက်နေ့ ကိုကျင်းပရန်ကြေငြာခဲ့ပါသည်။ TV တွင် ပြသနေသော မဲပေးပုံ မဲပေးနည်း နည်းစနစ် များမှာ အယောင် ပြ ယုံ ဖြစ်ပြီး လူကြားကောင်းအောင် ပြောနေခြင်းများဖြစ်ပါသည်။
၁။ယခုဆန္ဒခံယူပွဲတွင် မိမိတို့ဘက်မှ လုံးဝမနိုင်နိုင်ပါ။
၂။မိမိတို့၏ အထင်မှာ စစ်တပ် /ရဲ / ဌါနဆိုင်ရာ / ကြံ့ဖွံ့ / စွမ်းအားရှင် / မီးသတ် /ကြက်ခြေနီ / ယရက / အမျိုးသမီးရေးရာ / မိခင် နှင့် ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးတို့တွင် ရှိနေသော ပြည်သူများထဲတွင် ၄င်းတို့ကို မကြိုက်သူများရှိနေမည် ဟု မိမိ တို့ ထင်မှတ်နေပါသည်။ ၄င်းမှာ မှန်ပါသည် ။ သို့ပင်မဲ့ နအဖ အစိုးရသည် ၄င်းကိစ္စကိုမိမိတို့ထက် ကြိုသိနေပြီး အဖွဲ့အစည်း အားလုံး၏ အဖွဲ့ဝင်အားလုံးအတွက် ထောက်ခံမဲကိုကြိုတင်ပေးစနစ်ဖြင့်အတင်းအကြပ် ရယူ ပြီး ဖြစ်သည်။
၃။၄င်းကိစ္စကိုပြည်တွင်းပြည်ပရှိအင်းအားစု အားလုံးသို့ ချက်ချင်းအသိပေး ကြောင်းကြား ပြီး မည်သို့ ဆက်လုပ်ရမည်ကို ချက် ချက်ဆွေးနွေးပြီး အကြောင်းပြန်စေချင်ပါသည်။ှ
၄။နအဖ မှာ ၄င်းတို့ သေချာပေါက်နိုင်ရန် ကြိုတင်အကွက်ချပြီး ဖြစ်သည်။
၅။မိမိတို့၏မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းများကိုချက်ချင်းအစည်းအဝေး ခေါ်ယူပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်တခု အမြန်ဆုံးပို့ပေးပါရန်
မှတ်ချက်။ အရေးကြီး သဖြင့် ချက်ချင်းဆောင် ရွက်စေချင်သည်။
Kyaw Zwar said...
Hi Stupid Myanmars...
I should call you all stupid Myanmars...
Whether you vote yes or no will not change anything...
Military can rule the country for more than 20 years without any elections and they will rule for next few more years.
They are making fun for this election and stupid Myanmars debate about whether they should vote yes or no...
Please remember that your vote will not change anything...
No way except fighting that means both people uparising and attacking with arms by all revolutionary forces.
စုံစမ်းလေ့လာချက်အရ ကာကွယ်ရေးနှင့်ပြည်ထဲရေး လက်အောက်မှ လက်နက်ကိုင် တပ်ရဲလုံထိန်း စသည်တို့ မှာ ကြိုတင်မဲပေးစံနစ်ဖြင့် မဲပေးထားပြီးပြီဟု သိရပါသည်။
အရပ်သားဝန်ထမ်းများမှာ သက်ဆိုင်ရာရုံးများတွင် မဲပေးရန် စီစဉ်ထားသော်လည်း အခုချိန်ထိ မဲမပေးရသေးဟု ဆိုပါသည်၊ ၀န်ထမ်းများထံသို့ တိုက်ရိုက်စုံစမ်းလျှင် ပိုသေချာပါမည်။
ကြံ့ဖွတ် စွမ်းအားရှင် ကြက်ခြေနီ မီးသတ် မိခင်ကလေးများ မဲပေးသည့်ကိစ္စမှာလည်း စုံစမ်းရန် ခက်ခဲမည်ဟု မထင်ပါ။
လက်နက်ကိုင်တပ်များအားလုံး ငါးသိန်းနှစ်သောင်းကျော်နှင့် အရပ်သား ၀န်ထမ်း စုစုပေါင်းမှာ မဲပေးနိုင်သောလူဦးရေနှင့် နှိုင်းစာလျှင် နအဖ အပိုင်တွက်ထားသော ထိုမဲပြားမှာ အနိုင်ပိုင်းနိုင်သည့် အခြေအနေ မရှိသေးပါ။
ထို့ ကြောင့် စစ်မရောက်ခင် မြားကုန်သည့်စိတ်ဓါတ် မမွေးရန်လိုပါသည်၊ လှေခွက်ချည်းကျန် အလှံမလဲစတမ်းစိတ်ဓါတ်ကို ဤအချိန်တွင် မွေးရပါမည်။
တဦးချင်းတာဝန်ယူမှု စုပေါင်းခေါင်းဆောင်မှု ဖြင့် စနစ်ဆိုးကို ဖန်တီးပေးမည့် ဥပဒေဆိုးကို ၀ိုင်းဝန်းကန့် ကွက်ရပါလိမ့်မည်။
ကန့် ကွက်မဲနိုင်လျှင် နအဖ တရားဝင်အစိုးရမဖြစ်သလို ဒီမိုကရေစီလိုလားသော ပြည်သူဘက်မှလည်း အခွင့်အလမ်းကောင်းများ ပေါ်လာပါလိမ့်မည်။
တိုင်းပြည်အတွက် သေရေးရှင်ရေး ဖြစ်နေသောအချိန်တွင် စတူးပစ်မြန်မာများဟူသော အသုံးအနှုန်းများကို မြန်မာတယောက်အနေနှင့် မသုံးသင့်ပါ။ ကိုယ့်တိုင်းပြည် တိုးတက်သာယာရေးအတွက် သံဃာတော်များအပါအ၀င် ကိုယ်ကျိုးစွန့် အနစ်နာခံသူများစွာတို့ စစ်အာဏာရှင်စံနစ်ကို တိုက်ဖျက်ရန် ကြိုးစားနေချိန်တွင် သင်ကော မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဘာလုပ်ပေးပြီးပြီနည်း။
Pyi Chit Khin said...
My father had one experience during "Ma-hsa-hla" period voting of being forced to change all "cross 'x'" to all "right '/'" (means all agree).
By reflecting this, what should we do if all of our "No" are being forced to cheat "Yes" and published all of the Myanmar from Singapore vote "Yes"??????
I don't have any trust on their activity and what shoud we continue to do?
This actions have been taken since last3months and not only this, they collect already about the in detail data for all staffs of private sectors, including entrepreneurs to put their team member and made yes vote already without their knowledge but also they made all new ID cards to people in whole country that are entered into these already.
17 April 2008 at 01:14
နအဖဟာ ဘယ်နည်းနဲ့မဆို အနိုင်မဲရအောင် လုပ်မှာပဲဆိုတာ ကျနော်တို့ ထပ်ပြောစရာတောင် လိုလောက်မယ် မထင်ပါဘူး... ကျနော်ဒီစကားပြောနေတာ အကြောင်းရှိပါတယ်... တော်တော်များများက ကန့်ကွက်မဲပေးလိုက်ရင် ဒါကြီးပျက်သွားမှာပဲ.. ပျက်သွားလောက်ပါတယ်လေ ဆိုပြီး ကိုယ်ဘက်ကိုယ် ဖြေတွေးနေကြလို့ပါ... သူတို့ လိုချင်တာရဖို့ ဘယ်နည်းမဆိုသုံးဖို့ ၀န်မလေးတဲ့ နအဖဟာ နိုင်မဲ မလောက်ရင် လိမ်ဖို့ ညစ်ဖို့ ၀န်လေးမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သတိချပ်စေလိုပါတယ်..
မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးက မဲရုံပေါင်းများစွာမှာ ဘယ်မဲရုံက မဲလိမ်ခဲ့သလဲဆိုတာ တစ်ရုံချင်း လိုက်စစ်ဆေးဖို့ ခက်ပါတယ်... မဲပေးနိုင်တဲ့ လူဦးရေရဲ့ နှစ်ဆရှိတဲ့ မဲလက်မှတ်နဲ့ ပုံစံတူမဲပုံးနှစ်ပုံး ထုတ်ပေးထားတာကြောင့် မဲပုံးတွေလဲလှယ်ပစ်ဖို့ ဖြစ်နိုင်ချေဟာလည်း အင်မတန် များပါတယ်... ကန့်ကွက်မဲ ထောက်ခံမဲ မတိမ်းမယိမ်းဖြစ်နေရင်တောင် ကန့်ကွက်မဲတချို့ကို ပယ်မဲဆိုပြီး ကြေငြာဖို့ ဖြစ်တန်ချေလည်း ရှိပါတယ်... တခြား ကျနော်တို့မတွေးမိတဲ့ လိမ်နည်း ခိုးနည်းတွေလည်း ရှိဦးမှာပါ.. အာဏာသိမ်းတာကို နိုင်ငံကို ကယ်တင်ခဲ့သယောင်ယောင် ၀ါဒဖြန့်ခဲ့တဲ့ ..၉၀ ရလာဒ်ကိုတောင် မျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီး မသိချင်ယောင်ဆောင်ခဲ့တဲ့... ဒီပဲယင်းအမှုကို သူတို့မဟုတ်သယောင်ယောင် ဇာတ်လမ်းဆင်ခဲ့တဲ့.. သံဃာတွေကိုသတ်ပြီး အတုတွေပါလို့ စွပ်စွဲခဲ့တဲ့... ဒီသောက်ရှက်မရှိတဲ့ စစ်အုပ်စုဆီက တရားသောနည်းနဲ့ မဲနိုင်ဖို့များ မျှော်လင့် နေကြသေးလား...
ဆောရီးပါ ကျနော်ကတော့ ကန့်ကွက်မဲတော့ ထည့်မှာပါပဲ... ဒါပေမယ့် အခြေခံဥပဒေဂျီး အတည်ပြုလိုက်ပါပီ ဆိုပြီး သွားဖြဲပြီး ကြေငြာဖို့ စောင့်နေတဲ့ စစ်အုပ်စုဟာ အားလုံးကို ပြင်ဆင်ပြီးနေလောက်ပါပြီ.. ဒါကြီးအတည်ပြုပြီးသွားရင် NLD လည်း မြောင်းထဲရောက်ပါပြီ... ၉၀ ရလာဒ်ဟာ (တရားဝင်) တရားမ၀င် ဖြစ်သွားပါပြီ.. အေးအေးနေချင်တဲ့ VLD လူကြီးတွေလည်း စိတ်အေးအေးနဲ့ ရိပ်သာဝင်နိုင်ကြပါပြီ... ပညာရှာမှီးလိုတဲ့ မျိုးချစ်လူငယ်များလည်း တက္ကသီလာ အကျဉ်းထောင်ကြီးမှာ ဆုံဆည်းနိုင်ကြပါပြီ...
ကဲဒီတော့ ရှေ့က ဘယ်သူခေါင်းဆောင်ပြီး လမ်းပေါ်ထွက်မလဲ.. ရက်စွဲ သာပေးပါ... ခေါင်းဆောင်တွေ ခေါင်းရှောင်နေအုံးမယ်ဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့လည်း ဒူးနှန့်ပြီး လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်လိုက်ပါအုံးမယ်...
သီဟ( Lionslayer )
NLD should prepare to ask for standard international election rule and seriously concern about their published election rule also. People have to be knowledgeable about pre vote is eligible or not. Also people should know about No vote go to mix yes vote in Masala period events that can still happen or not. People should ask legal evidence of vote document because vote should be No mark. Also I really surprise about blogger and news agency taking holidays in these seriously important period.
17 April 2008 at 01:39
ဘလော့ဂါတွေ သတင်းဌာန သင်္ကြန်တွင်း မအားဘူးလေ.. ရေကစားနေကြရတယ် မဟုတ်ပေလား... ရှင်းရှင်းပြောရရင် ဒီဘလော့ဂ်တွေ သတင်းဌာနတွေဟာ ပြည်တွင်းက လူအများစုအတွက် အလှမ်းဝေးလှပါတယ်..
ပြည်တွင်းမှာ အင်တာနက် ပုံမှန်သုံးသူ ဘယ်လောက်ရှိမလဲ.. လွန်ရော ကျွံရော ၅ သောင်းပေါ့... အဲဒီမှာ ပရောက်စီကျော်ပြီး သတင်းတွေ ဘလော့တွေ ပုံမှန်ကြည့်တဲ့လူ ငါးထောင် ပြည့်မလား.. ပြည်တွင်းကပြည်သူတွေကို ဘယ်လိုများ ထိထိရောက်ရောက် သတင်းပေးပို့နိုင်မလဲ... လက်တွေ့မဟုတ်တဲ့ အပြောတွေနဲ့ ဘယ်လောက်များ နစ်မျောနေကြရအုံးမှာလဲ....
ပြည်တွင်းမှာ တကယ်ခေါင်းဆောင်နိုင်တဲ့ ပြည်သူကို စည်းရုံးနိုင်တဲ့လူတွေ မရှိတော့ဘူးလား.... ခေါင်းပေါ်က စက်သေနတ်ကျည်ဆန်တွေ တရွှီရွှီနဲ့ ဖြတ်သွားတဲ့ ခံစားမှုကို တွေးမိရင် ကြက်သီးထတုန်းပဲ... ဒါပေမယ့် စစ်မှန်တဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုအောက်မှာ ကျနော်တို့ သေနတ်ကျည်ဆန်လည်း ရင်ဆိုင်ရဲပါတယ်... ဒါပေမယ့် ပြဿနာက အခုဘယ်သူခေါင်းဆောင်မှာလဲ...
17 April 2008 at 02:02
ကိုသီဟ ခင်ဗျာ။ လက်တွေ့မှာ အခု ဘယ်သူ ခေါင်းဆောင်မှာလဲ ဆိုတော့ ခေါင်းဆောင်မယ့် ခေါင်းဆောင်က ကိုသီဟပါပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကိုသီဟက သူများတွေ မမြင်နိုင်တဲ့ အပြစ်တွေကို မြင်နိုင်သိနိုင်နေတဲ့ လူ တစ်ယောက် ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။
သူများကို အရင် မဝေဖန်ခင်မှာ ကိုယ့်ဘာသာ အ၇င် ကြည့်နိုင်မြင်ကြရမှာပါ။ အားလုံးမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ သတင်းဌာနတွေ၊ ဘလော့ရေးတဲ့ လူတွေကမှ မြန်မာနိုင်ငံလွတ်မြောက်ရေးကို ရယူပေးနိုင်တဲ့ လူတွေ မဟုတ်ပါဘူး။
ခင်ဗျားမှာလည်း တာဝန်ရှိပါတယ်။ ကျုပ်မှာလည်း တာဝန်ရှိပါတယ်။ အခု ဒီစာကို လာဖတ်နေတဲ့ လူမှာလည်း တာဝန်ရှိပါတယ်။
သူတို့က နိုင်ငံခြားကနေ အော်နေတယ်။ တကယ်ခံရတော့ ပြည်တွင်းက ငါတို့ ခံနေရတယ်ဆိုတဲ့ ခပ်ပေါ့ပေါ့ အတွေးတွေ၊ စကားလုံးတွေ ဦးနှောက်ထဲက ထုတ်ပစ်လိုက်ပါတော့။ အားလုံး ကိုယ်ရောက်နေတဲ့ နေရာကနေ အကောင်းဆုံး ကိုယ့်တာဝန်ကို ကိုယ်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ ယောက်ကျားကောင်း စိတ်ဓါတ်ကို မွေးစေလိုပါတယ်။
ဘလော့ရေးတဲ့ လူတွေက ဘာမှ မရေးပဲ နိုင်ငံခြားမှာ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်ပြီး အေးအေးဆေးဆေး ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်သလို နေကြ၇င် ခင်ဗျားပြောတဲ့ လွန်ရောကျွံရော ၅ သောင်းတောင် ဘာမှ မသိနိုင်တော့ပါဘူး။
သူများကို အပြစ် မတင်ပါနဲ့။ ဒီနေ့ ခင်ဗျား လူဘယ်နှစ်ယောက်ကို ကန့်ကွက်မဲ သွားပေးဖို့ စည်းရုံးပြီးသွားပြီလဲ။ ကန့်ကွက်လို့ မအောင်မြင်ရင် ဘာဆက်လုပ်မလဲ၊ အောင်မြင်ရင်ေ၇ာ ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတာကို ခင်ဗျား ဘယ်သူတွေနဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါသလဲ။ ဘာတွေ ပြင်ဆင်ထားပါသလဲ ... အဲဒီ မေးခွန်းတွေကို ခင်ဗျား အရင် ဖြေရမှာပါ။ ကျုပ်လည်း ဖြေရမှာပါ။ အခု ဒီစာကို ဖတ်နေတဲ့ လူလည်း ဖြေရမှာပါ။
ဘာကြောင့် သူများတွေကို ဝေဖန်ပြီး၊ ခေါင်းဆောင်မယ့်လူကို မျှော်နေတာလဲ။ ကျုပ်ကတော့ ကိုယ့်ဘာသာ ခေါင်းဆောင်တယ်။ ကိုယ့်နောက် လိုက်မယ့် လူတွေကို ခေါင်းဆောင်ပေးတယ်၊ ကိုယ့်ထက် သာတဲ့ လူတွေ့ရင် ခေါင်းဆောင်တင်မယ်။ ကိုထိုက်ရေးထားခဲ့သလို အနည်းဆုံး လူ ၁၀ ယောက်ကို ကန့်ကွက်မဲ သွားထည့်ဖို့ စည်းရုံးမယ်။ ဒါပဲ လုပ်တယ်။ သူများကို အပြစ်တင် ဝေဖန်ဖို့ တွေးတောင် မတွေးမိပါဘူး။ အမှန်မြင်နိုင်ပါစေ။
ဟုတ်ကဲ့ ကျနော့ဝန်းကျင်က လူအယောက် ၃၀ မက ကို ကျနော်ပြောဆိုစည်းရုံးပြီးပါပြီ... အများစုက ပြောစရာတောင် မလိုပါဘူး.. ကန့်ကွက်မဲထည့်မယ့် ဘက်ကချည်းပါပဲ... ကျနော်ပြောနေတာ ဘလော့ဂါတွေကို အပြစ်တင်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး... ပြည်တွင်းမှာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်အောင် ဦးဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ လူကို ကျနော်ရှာနေတာပါ.. ဟိုနားရုံးစုရုံးစု ဒီနားရုံးစုရုံးစုလောက်ကတော့ တစ်နာရီတောင် မခံပါဘူး...
ရှင်းရှင်းပြောရရင် ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း ပြည်တွင်းမှာ မရှိတော့ပါဘူး... ဒါပေမယ့် ပြည်တွင်းမှာ တိုက်ပွဲစပြီဆိုတာနဲ့ ဒီကဘ၀ကို ပစ်ထားခဲ့ပြီး အချိန်မရွေး ပြန်ဖို့ အဆင်သင့်ပါပဲ... ကျနော်က Vote NO အဆင့်ထိတောင် အရောက်မခံဘဲ တိုက်ပွဲတစ်ခု ဆင်နွှဲစေချင်တာပါ... ကျနော် လက်တွေ့ရလာဒ် လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုကို လုပ်ချင်နေတာပါ... ကျနော်တစ်ယောက်တည်းလည်း မလုပ်နိုင်ပါဘူး... ကျနော်ကိုယ်တိုင်ကလည်း ခေါင်းမဆောင်နိုင်ပါဘူး..စည်းရုံးရေးစွမ်းရည်လည်း ဒီလောက်မရှိပါဘူး... သူများတွေလုပ်နေသလို ဘလော့တောင် မှန်မှန် မရေးအားပါဘူး...
ဒါပေမယ့် စစ်အုပ်စုရဲ့ လုပ်ရပ်တွေအောက်မှာ Vote NO ဟာ နောက်ကောက်ကျန်ခဲ့တော့မယ်ဆိုတာ သတိချပ်စေလိုပါတယ်... မေ ၁၀ ပြီးသွားတော့မှ တူတို့ မတရားလုပ်တွားပါတယ်... အဟင့်အဟင့် ဆိုပြီး ကလေးလို ခြေဆောင့် ငိုနေလို့လည်း မထူးတော့ပါဘူး... ဘာကြောင့် ဒီပွဲကြီးကို လူထုအားနဲ့ ဖျက်ရမယ်ဆိုတာ သဘော မတူနိုင်ရတာလဲ...
ဒီမိုကရေစီ ခေတ်ပြောင်းတော်လှန်ရေး အောင်ရမည် ၊
စစ်အစိုးရမှ့ယခု့ ကဲ့သို့မတရားသဖြင့် ပြည်သူဆန္ဒမပါပဲ မဲလိမ်ကောက်နေခြင်းကို သက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်နာလည်သေား ပြည်ပရောက် မြန်မာနိင်ငံသားများမှတဆင့် ( UN ) သို့အထောက်အထားများဖြင့် တင်ပြပေးပြီး မိမိတိုဘက်မှ့လက်ဦးမှူ ရယူနိင်ရန် အကြံညဏ်ပေးချင်ပါသည်။ ။
17 April 2008 at 08:12
burmese boy said...
ဘယ်သူတွေဘာပဲပြောပြော ဘာပဲအော်အော် ဘာပဲလုပ်လုပ် လူထုအားနဲ့ တိုက်မှ အပြတ်ဖြုတ်မှာ ဒီစစ်အာဏာရှင်ကို။ ငေးမနေ နဲ့ မဲပေးဖို့မပေးဖို့ လဲငြင်းမနေနဲ့ NLD ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးမူ ကိုလဲ သုံးမနေ နဲ့တော့ အန်တီ စုလဲ ဘယ်တော့မှ လွတ်တော့မှာ မဟုတ်ဘူး နိုင်ငံတိုင်းနီးပါးမှာ ပြည်သူလူထုအင်အား နဲ့ တိုက်မှ နိုင်ခဲ့တဲ့ အာဏာရှင် ပဲရှိတယ် ! လူထု ဦးစိန်ဝင်း ပြောတာကို မမေ့ပါနဲ့ ! အခြေခံဥပဒေ ကို မဲပေးမပေး ငြင်းနေတာကို က စစ်အာဏာရှင် ကိုထောက်ခံနေတာ နဲ့အတူတူပဲ ! ကဲအားလုံးရှင်းတယ်နော် ! ဘာဆက်လုပ်မလဲ ! NLD လဲမ မျော်နဲ့ UN ကိုလဲ မမျော်ပါ နဲ့ ! ဒို့ပြည်သူကို စစ်တပ်က ဘယ်လောက်သတ်နိုင် မှာလဲ ! စစ်တပ်က စစ်သားအားလုံး မိစ္ဆာတွေလား ! ဗုဒ္ဓဘာသာ ဝင်တွေမရှိတော့ဘူးလား ? ရဲရဲ ဝင့်ဝင့်သာ လုပ်ပါ ! ပြည်သူချစ်သော တပ်မတော် သားများ ပြည်သူနင့် ပူးပေါင်းလာပါလိမ့်မည်
17 April 2008 at 09:14
DHAMMA GUARDIAN said...
ရဲ့ မက်စေ့ကို တွေ့လို့ လာလည်ပါတယ်။
အဖြေကတော့ အစကတည်းက ရှင်းနေပြီးသားပါ။ မပိုင်ရင်
မလုပ်ဘူး။ ပိုင်မှ လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောပါဘဲ ။ သူတို့ဘက်
က ဒီလို အပိုင် လုပ်နိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်လာခဲ့တာ ကြံ့ဖွံ့ ဖွဲ့စည်း ကတည်း က လို့ နားလည်ရပါတယ်။
လူထု စိန်ဝင်း တို့လို သတ္တိရှိတဲ့ အမြော်အမြင်ရှိတဲ့ လူကြီး လူကောင်းတွေက တော့ပြတ်ပြတ်သားသား ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။
ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲ လို့ တွေဝေမနေသင့်တော့ဘူးလို့ ယူဆပါတယ်။
အန်အယ်ဒီက နအဖကို တရားမ၀င်တဲ့ အဖြစ်က တရားဝင် ကြားဖြတ်အစိုးရအဖြစ် နဲ့ အသိအမှတ်ပြုပေးမယ်၊ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ညှိနှိုင်းရအောင်လို့ ကမ်းလှမ်းပါတယ်။
ဒီလိုလူကြီးလူကောင်းနည်းနဲ့လမ်းဖွင့် တာကို နအဖက(သေနတ်ခါးထိုး ဓားမိုးအ စိုးရက)ပယ်ချငြင်းဆိုလိုက်တဲ့အခါ သတင်းဌာနတွေက လမ်းပိတ်သွားပြီး ဘာလုပ်ကြမလဲလို့ နိုင်ငံရေးသမားကြီးတွေနဲ့ သတင်းစာဆရာကြီးတွေကို တယ်လီဖုံးနဲ့ တွေ့ဆုံမေး မြန်းပါတယ်။
လူထုဒေါ်အမာက ဒီလိုဆိုရင် လူထုက လူထုနည်းနဲ့ အုံကြွတောင်းဆိုကြ ဖို့ပဲရှိတော့တယ်လို့ဖြေတယ်။
လူထုစိန်ဝင်းကတော့ အင်္ဂလိပ်လို ဆောင်းပါးတစောင်ရေးပြီး ပြည်ပအင်္ဂလိပ် သတင်းစာစောင်ထဲမှာထည့်တယ်။ လူတွေက ဆက်သည်းမခံနိုင်ကြတော့ရင် အုံကြွပေါက် ကွဲလာလိမ့်လို့သတိပေးပြီး ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့လည်း ကမ္ဗောဒီးယားမှာလုပ်သလို စစ်အစိုးရကို ကုလသမဂ္ဂကနေ ဖယ်ထုတ်အရေးယူပါတော့လားလို့ အကြံပေးတယ်။
အဲဒါတွေကို သဘောကျပြီး ပြည်တွင်းကနေ အခုလို သက်စွန့်ဆံဖျားပြောကြတာတွေကို ပြည်ပရောက် သတင်းစာဆရာကြီး ကြေးမုံဦးသောင်းက ထောက်ခံရုံမက ဂုဏ် ပြုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
(မောင်စွမ်းရည်၏ သတ္တိကောင်းတဲ့သတင်းစာဆရာ လူထုစိန်ဝင်းဆောင်းပါးမှ ကောက်နှုတ်ချက်)
လူထုစိန်ဝင်း က အာဏာရှင်ဖြုတ်ချရေးအတွက် လူထုအင်အားကိုသာယုံကြည်ကြရန် နှိုးဆော်သောမိန့်ခွန်း သည် မီဒီယာများမှ တဆင့်ပျံ့နှံ့သွားသည်။ သတင်းစာလောကတွင် သြဇာကြီးသော လူထု စိန်
၀င်းသည် လွန်ခဲ့သော ၂၀၀၆ ခုနှစ်၊ မေလကလည်း International Herald Tribute သတင်း စာကြီးတွင် မြန်မာပြည်၌ လူထုလှုပ်ရှားမှု ပေါ်ပေါက်လာတော့မည်ဟုကြိုတင်နိမိတ်ဖတ်ခဲ့သူ
ဖြစ်သည်။ သူကအာဏာရှင်ဖြုတ်ချရေးတွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး၊ ကုလသမဂ္ဂတို့ဖြင့် စိတ်ကူး မယဉ်ဘဲ လူထု အင်အားကိုသာ ကိုးစားရမည်ဟု ဆိုသည်။ မရှေးမနှောင်းတွင် ပြည်တွင်း၌ တရားဝင် အတိုက်အခံအဖြစ်ရပ်တည်နေသော အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်တွင်း၌လည်း လက်ရှိ အခြေအနေကို သည်းမခံနိုင်ဘဲ လူထုလှုပ်ရှားမှုကို ဖော်ဆောင်လိုသော အုပ်စုတစု ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ယခုလ (၁၈) ရက်နေ့တွင် ထွက်ပေါ်လာသော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (လူထုလှုပ်ရှားမှုကော်မတီ) ဖွဲ့စည်းကြောင်း ကြေညာချက်တွင် ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းများ တွင် လူထုတိုက်ပွဲများဖော်ဆောင်သွားမည်ဟု ပါရှိသည်။ အလားတူ ပြည်ပအခြေစိုက် သံဃာ ဦးသျှောင်အဖွဲ့ကလည်း မေလဆန္ဒခံယူပွဲအထိ မစောင့်တော့ဘဲ လာမည့် ဧပြီလ (၂၆) ရက်နေ့ တွင် ပြည်တွင်းပြည်ပတွင်သံဃာနှင့် လူထုလှုပ်ရှားမှုများ တပြိုင်တည်း လုပ်ဆောင်ရန် ကြေညာ ထားသည်။
(ခေတ်ပြိုင်ဂျာနယ် လတ်တလော မြန်မာပြည် နိုင်ငံရေး အငြင်းအခုံများ - နေနေ (၂-၄-၀၈) မှကောက်နှုတ်ချက်)
AV女優王國18禁地少女遊戲無碼肛交影片下載波波線上遊戲網海綿寶寶小遊戲愛愛成人影片下載av女優電影下載美女短片免費試看熟女人妻無碼電影分享楓之谷小遊戲台灣18成人網人妻熟女三級片正妹潮吹影片分享成人動畫免費看多人雜交 肛交 顏射飲精系列小弟弟貼影片小潘潘寫真圖片美臀長腿絲襪影片下載亂倫熟女情色網小弟弟貼影片區jp成人小弟弟貼片麗的娛樂網只有貼圖區月宮貼 - 情色貼圖區成人卡漫18百分百成人貼圖片區一葉情成人貼圖片區成人卡通頻道西洋成人貼圖片區成人免費貼圖片區100one百萬成人貼電影夜未眠成人影城成人文章 免費分享區a38av383影音城微風成人區成人影音live秀女優王國亞洲成人圖片區徐若瑄寫真集限制寫真女郎內衣模特兒寫真莉亞迪桑寫真集卡通a片下載情色免費成人小說18成人av影城波波情色貼圖免費成人圖片區成人圖貼站豆豆成人交友聊天室網際 情色 論壇貓貓 論壇捷克 論壇大眾 論壇ng綜合論壇台灣情色網論壇熊貓成人圖片173影音live秀亞洲風暴情色論壇hilive tv免費電影小魔女成人貼圖曼雪兒免費小說美女情色視訊聊天室免費影音視訊聊天室sogo情色論壇 - 成人色情論壇微風成人短片區小魔女自拍天堂亞洲禁果影城